Wararkii ugu dambeeyey qaraxii Norway & koox sheegatey masuuliyada(Sawiro+Video) – SBC
Wararkii ugu dambeeyey qaraxii Norway & koox sheegatey masuuliyada(Sawiro+Video)
Posted by editor on July 22, 2011 Comments
Dawlada Norway waxay xaqiijiyey in qaraxii ka dhacay magaalada Oslo in lala beegsadey xafiiska Ra’isalwasaaraha wadankaasi Jens Stoltenberg waxaa la xaqiijiyey in uu bad qabo oo aanu wax ku noqon qaraxa.
Qaraxyada & weerarka tacshiirada ee ka dhacay magaalada Oslo & Jaisirada Utoyo waxaa lagu tilmaamay in uu ahaa weerarkii ugu weynaa ee ka dhaca wadankaasi ee dhimasho, dhaawac & burbur keena tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee aduunka.
Weeraradan maanta ka dhacay Norway waxaa sheegatey inay ka dambeysay koox aan horey loo maqal oo lagu magacaabo ‘Helpers of the Global Jihad’ ama Gargaarayaasha Jihaadka caalamiga ah, kooxdani waxay ku sheegeen in weerarkan uu jawaab u yahay daabacaadii sawiradii kartoonka ee lagu mataley nabigeena Muxamed nabadgalyo & naxariis korkiisa EEBE ha yeelee.
Tirada dhimashada ayaa ilaa hada gaaraysa 12 qof waxaa laga cabsi qabaa in ay sii kororto cadadka geerida maadama ay jiraan dad badan oo dhaawacyo halis ah qaba.
Dawlada Norway waxay ka qixisay shacabka goobaha ku dhaw meelaha qaraxyadu ka dhaceen waxaana la soo sheegayaa in ay jirto xaalad cakiran oo ka taagan magaalada Oslo, waxaa dadka la farey inaanay isu soo bixin, waxaa lagu wargaliyey in aan la isku imaan dad badan.
Ninka weerarka toogaashada Jasiirada Utoyo waxaa la sheegay in da’diisu lagu qiyaasayo 30 ialaa 40 sano jir, waxaa la sheegay in uu ahaa nin cadaan ah oo leh timo dahabi ah, iyadoo la sheegay in uu ku hadlayey luuqa Norwegian gaar ahaan lahjada bariga wadankaasi looga hadlo.Link Video hoose ka daawo muuqaalka qaraxaasi (Dingiin sawiro naxdin leh caruurta & haweenka uurka leh)